Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Boeing nanosika entana vaovao 737-800BCF
Boeing dia nanambara ny fikasana hanokatra tsipika fiovam-pitaterana entana telo vaovao ary nanao sonia baiko hentitra tamin'ny Icelease ho an'ny 11 737-800 Boeing Converted Freighters. (Sary nahazoan-tsary: ​​Boeing)
Satria tsy mitsaha-mitombo ny fangatahana eran-tany amin'ny mpitatitra entana, Boeing [NYSE: BA] androany dia nanambara ny fikasana hampiditra tsipika fiovam-po telo ho an'ny 737-800BCF mitarika ny tsena manerana an'i Amerika Avaratra sy Eropa. Nanasonia baiko hentitra niaraka tamin'ny Icelease ihany koa ny orinasa ho an'ny iraika ambin'ny folo amin'ireo mpitatitra entana ho mpanjifa fandefasana ny iray amin'ireo tsipika fiovam-po vaovao.
Amin'ny 2022, ny orinasa dia hanokatra tsipika fiovam-po iray ao amin'ny tranoben'ny Boeing London Gatwick Maintenance, Repair & Overhaul (MRO), ny hangar manara-penitra any Royaume-Uni; ary tsipika fiovam-po roa tamin'ny 2023 tao amin'ny KF Aerospace MRO any Kelowna, Kolombia Britanika, Kanada.
"Ny fananganana tambajotra isan-karazany sy manerantany amin'ny trano fiovam-po dia zava-dehibe amin'ny fanohanana ny fitomboan'ny mpanjifantsika sy ny famenoana ny filan'ny faritra," hoy i Jens Steinhagen, talen'ny Boeing Converted Freighters. "Ny KF Aerospace sy ny mpiara-miasa aminay Boeing ao London Gatwick dia manana ny fotodrafitrasa, ny fahaiza-manao ary ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fanaterana Boeing Converted Freighters mpitarika ny tsena amin'ny mpanjifanay."
"Tena faly izahay hanitatra ny fifandraisantsika amin'i Boeing," hoy i Gregg Evjen, lehiben'ny mpiasan'ny KF Aerospace. “Niara-niasa tamin'ny zotram-pamokarana Boeing nandritra ny 30 taona mahery izahay. Miaraka amin'ny traikefantsika amin'ny fiovan'ny entana, ny mpiasa tena mahay sy ny fepetra ara-teknika rehetra efa misy, dia vonona ny hiasa sy hanampy amin'ny fanompoana ny mpanjifan'i Boeing izahay.
Ho an'ny Icelease, izay vao haingana nanitatra ny fiaraha-miasa tamin'ny Corrum Capital tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa antsoina hoe Carolus Cargo Leasing, ny baiko ho an'ny 737-800BCF iraika ambin'ny folo no ho baiko voalohany nanova ny entana tamin'ny Boeing. Ny mpanofa dia ny mpanjifa fanombohana amin'ny fiovam-po ao amin'ny tranoben'ny MRO London Gatwick ao Boeing.
"Matoky ny kalitao sy ny firaketana voaporofon'ny Boeing's 737-800 niova fo izahay, ary faly ho mpanjifa fanombohana ho an'ny trano MRO vaovao any Londona," hoy i Magnus Stephensen, mpiara-miombon'antoka ambony ao amin'ny Icelease. "Tsy andrinay ny hampiditra ny entam-barotra amin'ny sambonay mba hanompoana ny mpanjifanay mitombo maneran-tany miasa amin'ny lalana an-trano sy fohy."
Tany am-piandohan'ity taona ity, nanambara i Boeing fa hamorona fahaiza-manao fiovam-po 737-800BCF fanampiny amin'ny tranokala maromaro, ao anatin'izany ny tsipika fiovam-po fahatelo ao amin'ny Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO), ary tsipika fiovam-po roa amin'ny 2022 miaraka amin'ny mpamatsy vaovao, Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA) any Costa Rica. Rehefa lasa mavitrika ireo tsipika vaovao dia hanana tranokala fiovam-po any Amerika Avaratra, Azia ary Eoropa i Boeing.
Boeing dia maminavina fa 1,720 ny fiovam-pitaterana entana ilaina ao anatin'ny 20 taona ho avy mba hanomezana ny fangatahana. Amin'ireo, ny 1,200 dia ho fiovam-batana mahazatra, ka saika ny 20% amin'izany fitakiana izany dia avy amin'ny mpitatitra Eoropeana, ary ny 30% dia avy any Amerika Avaratra sy Amerika Latina.
Ny 737-800BCF no mpitarika ny tsenan'ny entana entana amin'ny vatana manana baiko sy fanoloran-tena mihoatra ny 200 avy amin'ny mpanjifa 19. Ny 737-800BCF dia manome fahatokisana ambony kokoa, fanjifana solika ambany kokoa, ambany kokoa ny vidin'ny fampandehanana isaky ny dia ary fanohanana ara-teknika amin'ny serivisy eran'izao tontolo izao raha oharina amin'ireo entana hafa amin'ny vatana. Mianara bebe kokoa momba ny 737-800BCF sy ny fianakaviana mpitatitra entana Boeing feno Eto.